Honor Magic 2: Ukucaciswa, ixabiso kunye nokwaziswa | Zonke iinkonzo ze-intanethi
Ekupheleni kuka-Agasti, ngexesha le-IFA 2018, inkcazo-ntetho esemthethweni ye-Honor Magic 2 yabanjwa. Kule meko, Sithetha ngantoni apha?, Iinkcukacha zokuqala zesiphelo esitsha esitsha somenzi waseTshayina zinokwaziwa. Nangona bekungekho nanamhlanje, nge-31 ka-Okthobha, xa ifowuni yayiziswe ngokusemthethweni. Imodeli apho uphawu lwaseTshayina luhlaziya uluhlu lwalo oluphezulu, kwaye luza notshintsho oluninzi.
Njengoko besesibonile kwinkcazo-ntetho yakhe kwi-IFA 2018, le Hlonipha umlingo 2 yongeza kwifashoni yokuhambisa izikrini, eqala ukufumana ukubambeka kwimarike. Kwezi veki besifumana iinkcukacha malunga nale fowuni, ekuye ekugqibeleni sazi zonke iinkcukacha.
Kwinqanaba lobuchwephesha sijolise kumgangatho opheleleyo opheleleyo, othembisa ngokungathandabuzekiyo ukuba uza kunika into eninzi yokuthetha. Ngaphandle kokubonisa impumelelo esiyibonayo kwiiFowuni zeHlonipho, ethathe umtsi kumgangatho ngo-2018. Sishiya wena kuqala kunye neenkcukacha zayo ezipheleleyo.
1 Ukucaciswa kokuhlonipha iMilingo 2
2 Hlonipha umlingo 2: Imbeko iqhubeka ukuya phambili
Ukucaciswa kokuhlonipha iMilingo 2
Amanye amarhe athe avuza malunga nomnxeba aqinisekisiwe ekunikezelweni kwesi siphelo. Ayidanisi xa kufikwa kwii-specs, kwaye iya kuza nexabiso eliphantsi kunabanye abakhuphisana nabo. Oku kukucaciswa kwayo ngokupheleleyo:
Ukucaciswa kobuchwephesha kuHlonipha uMlingo 2
Umzekelo Umlingo 2
Inkqubo yokusebenza Ipie ye-Android 9.0 kunye noMlingo we-UI 2.0.
Isikrini I-intshi ye-AMOLED ye-6.39 isisombululo se-FullHD + kunye ne-19: 9 ye-screen ratio
Inkqubo I-Huawei Kirin 980 yenziwe nge-7 nm
Ukugcinwa kwangaphakathi 128 / 256 / 512 GB
Ikhamera esemva I-16 MP + 24 MP + 16 MP eneDual Tone LED Flash
Conectividad 4G GPS Bluetooth 5.0 USB Uhlobo C Wifi SIM ezimbini
Ezinye izinto Inzwa ye-NFC yeminwe ephantsi kwescreen sokubonwa kobuso be-3D
Ibhetri I-3400 mAh ene-40 W yokutsha ngokukhawuleza
Ubukhulu 157.3 x 75.1 x 8.3 mm kunye ne-206 gram yobunzima
Ixabiso 481 euro
Amandla awazukuba yingxaki kule fowuni, eza neyona processor ilungileyo. Ukongeza, ngokwendlela yoyilo sinokubona ukuba iyalandela utyekelo lweemodeli ezithile ezityibilikayo, njengeXiaomi Mi Mix 3 iboniswe nje kwiveki ephelileyo. Ukuboniswa emva kwefowuni yeXiaomi kunokuba ngomnye wemithwalo yale modeli.
Hlonipha umlingo 2: Imbeko iqhubeka ukuya phambili
Into ngokuqinisekileyo engaphezulu kwesinye iya kubamba umdla wakho kukuba le Honor Magic 2 inezinto ezithile ezifanayo nesiphelo esiphakamileyo sikaHuawei esiboniswe embindini wale nyanga. Inezinto zeHuawei Mate 20 Pro. Sifumana ikhamera yangemva kathathu kwisixhobo. Ukongeza, kwi-app yekhamera sinemisebenzi emininzi kunye neendlela zokufota, ezixhaswe bubukrelekrele bokusebenza ngokusebenza ngcono.
I-Honor Magic 2 ukubheja kwisenzisi seminwe esidityaniswe kwiscreen. Kancinci kancinci siyabona ukuba inani leefowuni ezikwi-screen yeminwe esonyukayo lonyuka njani. Yinto esiza kuyibona rhoqo kolu luhlu luphezulu, apho uphawu lwaseTshayina lujoyina khona nale modeli. Ukongeza, sinenkqubo yokuqaphela ubuso ye-3D. Inkqubo efana nale iboniswe ngeHuawei Mate 20.
Nangona kufikwa ekusebenziseni ukubonwa kobuso kuyo, kuyakufuneka sityibilike / sityhile ifowuni. Kusenokwenzeka ukuba kukuphela komqobo onokubekwa kule nkqubo, ekunokuthi kungabikho lula kubasebenzisi abathile. Kodwa kwinqanaba lokhuseleko kunye nokuchaneka kufuneka isebenze ngokugqibeleleyo.
Ngokubhekisele kwibhetri, iza nebhetri ye-3.400 mAh, ethi ngokudibeneyo neprosesa yayo isinike ukuzimela okwaneleyo kwemihla ngemihla. Ukongeza, sifumana ityala elifanayo elingu-40W elikhawulezayo elaziswa nge-Huawei Mate 20. Ke kuyakuthatha nokuba kuncinci ukutshaja ngokupheleleyo.
Inkcazo yefowuni yenziwe e-China, eya kuba yintengiso yokuqala apho iya kuthengiswa khona. Ngoku kunokwenzeka ukugcina le Honor Magic 2 e China, apho izakwaziswa ngokusesikweni nge-6 kaNovemba, NgolwesiBini weveki ezayo. Okwangoku kuphela kwentengiso apho ukwaziswa kwesixhobo kuye kwaqinisekiswa.
Inokwenzeka ukuba iya kuphehlelelwa eYurophu, kodwa okwangoku asinayo idatha kuloo nto. Kuya kufuneka silinde inkampani ngokwayo ukuba ithethe banzi malunga nokumiliselwa kweli lizwe liphezulu. Esikwaziyo ngamaxabiso aya kuba nawo ekumiselweni kwawo e-China. Amaxabiso asinceda ukuba sibe nombono malunga nexabiso elinokubakho eYurophu. Kuya kubakho iinguqulelo ezintathu zeHloniphe uMlingo 2 ezifumanekayo. La ngamaxabiso abo okutshintsha:
Inguqulelo ene6 / 128 GB: 3799 yuan (malunga nama-481 eeuros zokutshintsha)
Inguqulelo ene-8/128 GB: 4299 yuan (malunga ne-545 euro ukuyitshintsha)
Ushicilelo olukhethekileyo nge-graphene yokupholisa kunye ne-8/256 GB: 4799 yuan (607 euros to change)
Ifowuni iya kuthengiswa ngemibala emithathu: luhlaza, grey kunye nepinki.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » I-Honor Magic 2 ngoku isemthethweni: Isiphelo esitsha esiphakamileyo ngescreen sokuhambisa
Ungawenza njani amanyathelo amabini okuqinisekisa ku-Facebook, ku-Twitter nakwi-Instagram